Osimiri Colorado: njirimara, flora, fauna na e guzobere | Netwọk Mgbasa Ozi
Planetwa anyị nwere osimiri dị egwu nke na-eme anyị ka anyị chee na okike nwere mgbe ụfọdụ ihe ịtụnanya nye anyị. Taa anyị na-ekwu maka ya Osimiri Colorado. Ọ bụ osimiri dị na United States na North America na ọ bụ otu n'ime isi na ama ama. Ọ nọ na-arụ ọrụ kemgbe ihe karịrị nde 6 nde mmiri na-aga n'ihu na-eme ka nkume ahụ nwee okike, na -emepụta ọmarịcha ụdị na ọmarịcha miri emi na a maara ya dị ka Grand Canyon nke Colorado.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwazu ihe niile e ji mara Osimiri Colorado, otu esi kpụọ ya na ụdị ahịhịa na ahịhịa na ihe ịtụnanya a.
2 Nhazi nke Osimiri Colorado
3 Ifuru na umu anumanu
4 Mkpa akụ na ụba nke Osimiri Colorado
Osimiri Colorado na-amalite ibili na mpaghara Ugwu Rocky. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga hụ isi iyi nke Colorado, ị nwere ike ime ya site na ịga na njem ugwu a maara dị ka La poudre pass. N’ebe a ka amuru osimiri, o buru naani mmiri iyi di nfe na ala ahihia. Site n'ebe ahụ, ọ na-aga ngụkọta nke kilomita 2.334 ruo mgbe ọ ga-atọba n’Oké Osimiri Cortez. N’ụzọ a dum, ngụkọta nke mmiri 637,137 km2. Nke a na-anọchite anya 7% nke United States dum.
Usoro nke Osimiri Colorado bụ ezigbo pụrụ iche ma mara maka inwe mmetụta nke imebi ala ọ na-agabiga. N'ụzọ dị otú a, ka oge na-aga, a na-akpụ obere meanders na canyons nke na, nke nta nke nta, na-abawanye na nha. Site na amụrụ ya rue naanị kilomita 1,5, gafere afọ mbu emere nnukwu Canyon nke Yellowstone. Ọ bụ nke na-emighị emi, o nweghịkwa ogologo, ma ụzọ ya nke dị n’etiti gafere ọwa mmiri ndị miri emi karị.
Coursezọ Osimiri a na-agaferekwa ihe niile gbara gburugburu. Dịka ị pụrụ ịhụ, osimiri a dị oke mkpa maka mmepe nke ahịhịa na ahịhịa na mpaghara ndị a dịka ọ bụ isi iyi mmiri na mpaghara ụkọ. Akụkụ ala nke ụzọ ya bụ, oge ụfọdụ, na-akpọ nkụ kpamkpam. N’ụzọ dị mwute, oke mmiri ozuzo na-ebelata afọ n’afọ ọ bụla, agbanyeghị na Delta ka bụ ebe obibi nke ọtụtụ ụdị, ọ na-abawanye uru ọ bara.
Nhazi nke Osimiri Colorado
Ọ bụ osimiri tinyere ụtụ dị iri abụọ na ise na-enyere ya aka iri nri karịa na mmiri na njem ya niile. Riversfọdụ osimiri ndị kachasị ama ama n’iri mmiri bụ Green, Gila, San Juan, Gunnison, Azul, Dolores, Escalante na Paria.
Anyị ekwuola tupu oge ahụ na Colorado River emewo ochie kemgbe mmalite ya. Na Cretaceous, akụkụ nke North America ka dị n'okpuru Oke Osimiri Pasifik. Ọ bụ mgbe ahụ, ebe Colorado nwere ike ịmalite dị ka obere iyi nke na-aga na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ. Ma ọ bụ obere, ihe dị ka nde 5 gara aga, Mgbe mbuze na ihe nlere nke o mere na ala a, emebere uzo ya rue nke ugbu a nwere onu na Oke Osimiri Cortez. Osimiri nke ọzọ gburu ruo nde 40 gara aga.
Agbanyeghị na Osimiri Colorado dị ka ihe dị ka nde afọ iri na asaa, ihe ka ukwuu n'ime ihe niile a tụrụ atụ n'ime ala, na ntọala nke meanders na canyons, mere n'oge nde 17 gara aga.
Dịka anyị kwurula na mbụ, osimiri ahụ na-agagharị n'ọzara ma ọ bụ mpaghara ọzara ọkara ebe anyị na-ahụ anụ ọhịa ka emegharịrị na gburugburu ọnọdụ ọjọọ a. Dị ka aturu anya, osimiri nwere ezigbo mmiri gafere n'etiti ọzara ga-emepụta mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ jikọtara ya na ọtụtụ ụdị dị iche iche na-erite uru na gburugburu ebe obibi a dịtụ ụtọ karị. Anyị na-ahụ ụfọdụ ụdị azụ dị na osimiri a, ebe ọ bụ na ọnọdụ gburugburu ebe a dị iche na ha anaghị eme ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa. Ya mere, ụdị ndị a nwere ike ịchọta naanị na Osimiri Colorado bara nnukwu uru. N’ime ngụkọta nke osimiri ahụ, e nwere ihe dị ka ụdị azụ 14 dịgasị icheYa mere, nke a na-eme ka ndị njem nleta na-eme ka ọ dịkwuo mma kama ọ na-emekwa ka ọ dị mkpa iji chebe gburugburu ebe obibi.
O nwere akụkụ nwere agba odo na mpaghara nleta ebe ụdị ndị na-abụghị mmiri dị ka ụfọdụ nnụnụ na willow flycatcher na-abịa. Anyị hụkwara ụfọdụ ụsụ, awọ, nduru, coyotes, salamanders, na beaver. Na Delta bụ ebe obibi nke ọtụtụ ụdị, n'etiti nke anyị na-ahụ nnụnụ mmiri.
N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụkwa ahịhịa ndụ nke mebere ọkachasị obere osisi pere mpe. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na n'ime usoro ihe ọkụkụ dị n'ọzara, osisi anaghị enweta oke buru ibu n'ihi enweghị mmiri. N’akụkụ osimiri ahụ anyị nwere ike ịhụ ahịhịa dị iche iche, ụfọdụ ahịhịa na-ese n’elu mmiri nke osimiri ahụ sitere na geneamo Potamogeton na Typha, wdg. Anyị nwere ike ịchọta osisi ụfọdụ dị ka osisi Josué na mpaghara ndị dị n'akụkụ osimiri, mana na mpaghara ọzara ndị ọzọ anyị agaghị ahụ ihe ọ bụla nwere akwụkwọ ma ọ bụ osisi mara mma. Cacti meriri na mpaghara ndị a.
Mkpa akụ na ụba nke Osimiri Colorado
Dika o nweghi ike idi obere, Osimiri Colorado bukwara nnukwu mkpa aku na uba. Themụ amaala ala bekee ahụ na-adabere na mmiri a maka nri na ihe ọ drinkụ drinkụ. Obi abụọ adịghị ya, ọnụnọ nke osimiri a bụ isi ihe na mmepe maka ọnụọgụ ndị bi na otu mpaghara mpaghara kachasị kpọrọ nkụ na North America niile.
A na-egbochi akụkụ nke ọwa mmiri a site na mgbochi mmiri ndị na-atụgharị mmiri ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke mmiri ka a na-eji akụ ihe ọkụkụ na akụkụ ọzọ iji nye ndị bi n'akụkụ mmiri ahụ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. A na-eme atụmatụ na ọ na-enye ihe ruru nde mmadụ 40 mmiri.
Ihe a niile pụtara na Osimiri Colorado anaghị agafe oge kacha mma. Ntughari mmiri, mmetọ, webatara ụdị mbibi, na-emebi ọnọdụ osimiri dị mma ma na-emetụta ụdị ụmụ amaala. Site na mmetụta nke mmadụ, a na-ebibi ebe obibi dị oke ọnụ ahịa, na-akpata nkwụsị nke ụdị flora na fauna.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọbụlagodi osimiri dị egwu dịka Colorado na-emetụta aka mmadụ. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere osimiri a mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Akwa Colorado